Kukho izizathu ezahlukeneyo zokuba ukhathalelo lubekwe kwizitya zokuthambisa. Ayisiyomfuneko yokukhusela imveliso, kufuneka ibonelele abathengisi kwaye abathengi ekugqibeleni.
Eyona njongo iphambili yesitya sokucoca umzimba kukukhusela imveliso ngelixa igcinwe okanye ihambisa. Isikhongozelo kufuneka sisisombululo esicinga kakuhle esikhusela imveliso ekuwohlokeni kwaye inceda ukugcina umgangatho wayo. Imele ibe sisikhangeli esijongeka sijongeka njengenxalenye yentengiso yemveliso yobuhle.
Isikhongozelo kufuneka sineelebhile ezibonisa ngokufanelekileyo ulwazi olusisiseko malunga nemveliso kunye nomenzi wayo. Ezilebhile zibandakanya ulwazi loqhakamshelwano, izithako, imihla yokuphelelwa, izilumkiso kunye nemiyalelo. Iilebheli azichongi kuphela iimveliso kunye nemvelaphi yazo, ziyanceda ukubonelela abathengi ngezibakala ezingenako ukudideka okanye ukulahlekisa.
Ngokufanelekileyo, isitya senziwe ngezinto ezomeleleyo ukunika imveliso ubomi obude be-rafu. Imele ihlale ixesha elide ngokusetyenziswa kwabathengi. Ukuvulwa rhoqo nokuvalwa kwesikhongozeli kunokuthatha ixesha lokuhlawuliswa kwalo ngexesha elifanelekileyo. Ekugqibeleni, isikhongozeli kufuneka sikhusele imveliso ukuya kwinqanaba lokuba ihlala iyimveliso ekhuselekileyo yokuselwa ngabantu. Ngamanye amagama, isitya kufuneka sikhusele imveliso kubumdaka, uthuli nakwintsholongwane.
I-aesthetics yesitya sithathwa njengento ebaluleke kakhulu kuba iimveliso zezithambiso zithengiswa ikakhulu kumfanekiso wophawu. Kuba iimveliso zokucoca azithathwa njengamayeza okanye iimveliso ezisindayo, ukuthengisa izinto zokuthambisa kuxhomekeke kakhulu ekudibaniseni ulwazi lweempawu nemvakalelo. Isikhongozelo kufuneka sidlulise iimvakalelo malunga nendlela imveliso eya kuphucula ngayo ukubonakala kunye nesimo sakho sengqondo. Amaxesha amaninzi izinto zokucoca ziphinde zenziwe kwakhona kwaye ziphinde zenziwe ukubanceda ukubanika ukubonakala kwentengiso ngakumbi.
Ixesha lokuposa: ngoMeyi-12-2020
Iseti yeBhotile yeZithambiso, Iglasi yeBhotile yeZithambiso, Ibhotile ye-cosmetic, Iglasi yezipho zeglasi, Iiglasi zeCosmetic zeGlasi kwiibhotile zeoyile, Iglasi yeJar Cosmetic,